Mpihazona fiara ho an'ny iPad | Vaovao IPhone
Mpihazona fiara ho an'ny iPad-nao
Mandra-pahatongan'ny fotoana hanoloran'izy ireo anay hanafatra ny fiaranay miaraka amin'ny iPad tafiditra tanteraka ao anaty lohan-doha, dia tsy maintsy "manorim-ponenana" izahay amin'ny fampiasana fanohanana mifanaraka amin'ny fitaovantsika ary ahafahantsika manamboatra azy eo amin'ny lohan'ny lohany aloha, ka ny olona mipetraka amin'ny seza aoriana dia afaka mankafy mandritra ny diany. Ny safidy azo eny an-tsena dia saika tsy misy farany, manomboka amin'ny fononteny ho an'ny vola kely dia kely hatramin'ny entana lafo vidy. Amin'ireo zavatra hitako rehetra ireo, sisa tavela amin'ny telo aho, izay, noho ny kalitao sy ny vidiny, heveriko fa mahasahana ny filan'ny maro an'isa.
Seza Sinema Griffin 2 Io no maodely ampiasaiko. Sarona misy fehy eo an-damosina izay mamihina ny lohan-doha ary noho izany dia miorina tsara foana. Ny tranga dia mamela ireo mpampifandray iPad maimaim-poana, na ho an'ny headphone na ho an'ny famahanana. ianao ny bokotra volume. Ho an'ny vidiny sy ny kalitao dia io no nofidiko mihoatra ny herintaona lasa izay ary tsy manenina amin'ny fividianany aho. Tena tiako ihany koa fa ny iPad dia mifamatotra tanteraka amin'ny lohan-doha, amin'ny halaviran'ny azo ekena amin'ny mason'ny mpandeha aoriana. Azonao atao ny mahita azy amin'ny € 25-30 amin'ny Machnifics ary mifanaraka amin'ny iPad 2,3 sy 4 izy io, ankoatr'izay misy maodely ho an'ny iPad Mini izay hianjera tsy ho ela eo am-pelatanako.
Miakatra ny vidiny ary mahazo tombony ihany koa: ny Tendrombohitra Valet Headrest avy amin'ny The Joy Factory Izy io dia maodely miaraka amin'ny sandry azo ovaina, vita amin'ny fibre karbaona, izay miraikitra amin'ny iray amin'ireo fononteny. Raha ny filazan'ny mpanamboatra azy, ny setroka dia mifoka tanteraka ny hovitrovitra ka tsy hanelingelina ny mijery sarimihetsika mandritra ny dia, ary manana tombony ny fihetsika azo afindra amin'ny tanana rehetra, ka azo apetraka eo anelanelan'ny seza roa eo aloha, ka fa ny mpandeha rehetra any aoriana mahita ny iPad tsy misy olana.
Ny iPad dia raikitra amin'ny sandry noho ny fonony aoriana izay misy ny mpihazona azy. Ny fametrahana sy ny fanesorana ny iPad dia tena tsotra, satria ny fifandraisana an-trano dia amin'ny alàlan'ny andriamby. Hevitra lehibe, indrindra ho an'ny fahafahanao mametraka azy eo anelanelan'ny seza raha misy mpandeha roa na maromaro ao aoriany. Efa ambony ny vidiny, eo amin'ny € 95 eo Amazon UK.
Raha mila kalitao sy antoka feno ianao, ny fanohanana Fiara Vogel's RingO no tadiavinao. Manaraka ny lalàna mifehy ny fiarovana faran'izay henjana izy io, mametraka sy manaisotra azy io dia tsotra noho ny rafitra fitehirizana manokana ary mifanaraka ihany koa amin'ny ambiny fonosana RingO an'ny marika, toy ny fonosana rindrina ringO Flex Pack sy Starter Pack. Toy ny maodely teo aloha, dia misy tranga iray izay ahafahanao mametraka ny iPad amin'ny rindrambaiko. Ny vidin'ny sety dia manodidina ny 63 euro ao Amazon.es.
Fampahalalana bebe kokoa - Volkswagen dia mampiditra ny CrossBlue miaraka amin'ny iPads Mini ao anaty lohan-doha
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Mpihazona fiara ho an'ny iPad-nao
tariby lava dia hoy izy:
Manana iray mitovy amin'ny fahatelo aho izay tsy maintsy ampiana tariby lava ampy hahatratrarana ny lohan'ny fifohana sigara ao anaty fiara.
Valio ny tariby lava
Ireo faritra dimy mampidi-doza indrindra ho an'ny iPhone ao an-tranonao
Modern Combat 4, iray hafa amin'ny FPS tsara indrindra an'i Gameloft